Rue tea: Gịnị ka ọ bụ maka? Olee otú ime? Ihi nwoke na enyere aka?
Ntụziaka achicha karọt: Mụta otu esi eme nke a na-atọ ụtọ na nzọụkwụ dị mfe site na nzọụkwụ!
Fennel tea: Mara uru dị mkpa na ụzọ ziri ezi iji kwadebe
ahụ ike	 29 December 2018
Ruue tii: Hụ otu esi eme ya na ihe ndị nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ
Rue gafere ahịhịa ọgwụ, ọ bụ osisi dị omimi, nke a na-ejikarị eme ka gburugburu ebe obibi dị mma, wepụ anyaụfụ, anya ọjọọ na ọnọdụ ndị ọzọ na-adịghị mma nke mmadụ niile na-agabiga na ndụ. Ya mere, a tii nke rue mgbe nile na-anabata, ihe ọ bụla oge.
N'isiokwu ndị na-esonụ ị ga-amụta otu esi eme tii tii, yana ụfọdụ ihe enwere ike ịgbakwunye na tii gị. Lelee!
Olee otú ime ka rue tii?
Zọ kachasị mma iji mee tii bụ ịzụrụ akwụkwọ ọhụrụ na ụlọ ahịa ọgwụ, mana ọ bụrụ na ị rapaara, zụta nke akọrọ. Ogwe ndị ahụ e mepụtara emepe nwere ike ọ gaghị adị irè.
Were ụyọkọ nke ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịrị amị rue wunye ya na liter nke esi mmiri. Gbanyụọ ọkụ ahụ, kpuchie pan na mmiri na rue wee hapụ 30 nkeji. Nje tii na-a drinkụ iko atọ na anọ kwa ụbọchị na-enweghị ụtọ.
Esi kwadebe na drips?
Rue tii na-atọ ụtọ, nke a jụrụ oyi, yabụ ọ dị ezigbo ụtọ ma na-eje ozi dị ka ezigbo ọgwụ ọgwụ. Ma ị nwekwara ike ị toụ tii a maka ebumnuche ndị ọzọ na-abụghị naanị ahụike. Ya mere, ezigbo nchikota bụ tii nke rue na cachaça.
Cachaça bụ ihe nketa na-enweghị atụ nke Brazil ma ọ bụrụ na ewere ya na oke ego na obere, ọ ga-ewetara gị ọ joyụ ma ọ gaghị emerụ ahụ ọ bụla. Nsogbu nke cachaça maka imeju bụ ikwubiga okwu ókè na nke a ka a ga-ezere ya.
Ọ bụ ya mere ị ga-eji tinye tii nke cachaça n'ime tii gị ga-eme ka ọ dị ezigbo ụtọ, ọ ga-atọ gị ụtọ ịnụ ụtọ oge, gee egwu, rie ụfọdụ kuki, agbanyeghị, ihe ị ga-eme bụ nhọrọ gị.
Rue tii na cinnamon di nma maka gini?
Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ n'ezie na-a rueụ rue tii na a ike n'ụzọ, a oké echiche bụ ịgbakwunye ntakịrị nke ike tii. Emela ya gabiga, naanị tuo amaka n’otu iko. Ọ dị ezigbo ụtọ, maka ndị na-amasị cinnamon, na mgbakwunye na ịnwe antioxidant, mgbochi mkpali na mma maka ahụ gị dum.
Ọ kachasị mma ịzụta rue ọhụrụ, yabụ chọọ ụlọ ahịa ọgwụ na ahịhịa ma ọ bụ ụlọ ahịa ifuru nke nwere mkpụrụ osisi ị ga-akụ wee kụọ akwụkwọ ahụ iji mee tii ma jiri ya mee ka mmụọ nsọ nke ụlọ gị dị ọcha.
Ọ bụrụ n’ịchọtaghị ya, n’ime ụlọ ahịa nri eke, ị ga - azụta rue akọrọ, rere ya n’ime akpa ma ọ bụ ite ga - eji tii. Ya adịla mgbe ị ga-azụta mkpọ ahụ nke tii dị njikere. Emeputara ya kpamkpam, juputara na ngwaahịa ogwu nke na-eme ka ị ghara ịba uru nile nke rue ma ọ bụ ahịhịa ọ bụla ịzụrụ.
Ruei tii ọ na enyere aka belata nsọ nwanyị?
Rue bụ ogwu na-enyere aka na usoro nwanyị. Ọ bụghị na tii ga-eme ya ịhụ nsọ gbadaa, ma ọ na-eme ka mmiri mmiri dịkwuo mmiri, nke na-eme ka mkpochapụ a kwụsị. Na mgbakwunye, ọ dịkwa oke maka igbochi mgbochi na mgbaàmà anụ ahụ ndị ọzọ nke PMS.
Olee uru ọ bara?
Rue tii na-abara ahụ dum uru. Ọ na-arụ ọrụ na urinary, menstrual, respiratory and digestive systems, na-eme ka ihe niile rụọ ọrụ nke ọma dị ka o kwere mee, yana ịbụ analgesic magburu onwe ya.
Rue tii nadị gịrịgịrị?
A magburu onwe uru nke rue bụ na ọ nwere diuretic ike, ya bụ, ọ na-ewepu mmiri mmiri site na mmamịrị. Mwepụ nke mmiri mmiri na-enyere onye ahụ aka ịkatọ, wepụ nnu, abụba, site na mmamịrị na nke a bụ akụkụ nke usoro nke sliming.
Imirikiti ndị na-eche na ha kwesịrị ida pound ga-efunahụ nnu, shuga, abụba, site na mmamịrị. Iji mee nke a, na-a drinkụ nnukwu mmiri kwa ụbọchị, zere nri nwere ọtụtụ sodium na glucose ma drinkụọ kwa ụbọchị tii.
Gịnị ka ọ bụ maka?
Na mgbakwunye na uru nke ụmụ nwanyị na oge ịhụ nsọ na iwepu sodium na shuga na mamịrị, rue tii nwekwara ọrụ mgbochi mkpali, na-enyere aka na urinary incontinence, ọ dị mma maka ụkwara ume ọkụ, bụ analgesic maka mgbu mgbu na ọbụlagodi na-enyere aka site na ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke usoro nsị.
Ọ bụrụ na ederede ederede masịrị gị banyere tii tii, kekọrịta ya na netwọkụ mmekọrịta gị yana ngwa izi ozi!
Estradiol: Ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere hormone a!
HCG Nri: Know Maara? Ghọta ihe ize ndụ na uru!
Nri maka uru anụ ahụ
Halovar Testo: Chọpụta uru ma ọ bụrụ na arụ ọrụ!
Ndị na-alụ nwanyị ọhụrụ na Ndụ Ọhụrụ na Omume Ọhụrụ: Ndụ Ahụ Ike Maka Abụọ!